Jacob achiona Joseph aiona mwana komana wake akanaka. Jacob achiona Joseph aiona mwana komana wake akanaka.
Jacob achiona Joseph aiona mwana komana wake akanaka.
Jacob achiona Joseph aiona mwana komana wake akanaka. Vakoma vaJoseph vaiona muroti asina maturo ese. Ma Ishamaelite vaiti vakaona Joseph aiona mutapwa. Potiphar akatarisa Joseph aiona muranda akanaka. Mukadzi waPotiphar akaona Joseph aiona boyfriend kwayo. MaPrison officer aiti akaona Joseph vaiona musungwa chaiye. Asi vese vaiona zvisiri izvo. Asi Mwari achitarisa Joseph aitoona a Prime Minister we Egypt.
Nhasi dakukuudza kuti don't be discouraged nema onero anoita vanhu. Joseph mumwe chete iyeye vanhu vaiona zvakasiyana. Iwewe nhasi kune vanhu vanokuona semunhu akaipa, umwe izvozvi hama dzinokuona semuroyi chaiye, umwe achinzi ihure remakoko asi hapana wawakahura naye. Umwe anooneka sea ne makuhwa, umwe achioneka nevanhu sembavha but nhasi ndauya kuzokuudza kuti never mind kuti vanhu vanokuona sei asi be concerned nekuti Mwari anokuona sei. Kunyange vanhu vakataura sei kuda kwaMwari ndiko kunoitika.
Kana akati uchabudirira nyange vanhu vakataura zvakadini uchatobudirira chete. And zvakare usafe wakatarisira pasi mumwe munhu nekuti hauzive kuti ramangwana rake richange rakamira sei. Musikana wako webasa chaiye usamushore nekuti dzimwe dzenguva ndiye achapinza mwana wako basa . Mukoma webasa usamushore pamwe ndiye a chave President . Joseph haana kutanga ari Prime Minister akatomboitawo a slave achishanda senge zviri kuita musikana kana mukomana wako we basa. David akazoita mambo a asi akatangira ari mufudzi weak wai. Saka us ashore hako munhu asi ida munhu wese semadiro aunozviita